Heshiis hordhac ah oo laga gaaray Shirka Madaxda uga socda Afisyooni – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 7 April 2021
Ilo ku dhow dhow shirka uga socda Teendhada Afisyooni ee u dhexeeya Madaxda Dowlad Federalka, Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegaya in mabdi’iyan la isku raacay in shirka soo socda la ballaariyo.
Heshiiska hordhaca ah ee la gaaray ayaa waxaa ka mid ah in furitaanka shirka soo socda ay ka soo qeyb galaan Guddoomiyeyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka, Madaxweynayaashi hore, Ra’iisul Wasaarayaashi, qeybaha kala duwan ee bulshada.
Qodobada laga heshiiyay ayaa waxaa ay ka mid ahaayeen shuruudo ay hore ugu xireen shirka Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Saciid Deni iyo Axmed Madoobe.
Heshiiskan ayaa imanaya maalin kadib markii ay Beesha Caalamka ay ka codsadeen madaxda Soomaaliya inay heshiis gaaraan.
Kulamo maalmihii u dambeeyay dhexmaray dhinacyada ayaan wax hormar ah laga samayn kadib markii lagu heshiin waayay Ajandaha iyo cidda ka qayb-gelaysa shirka guud ee arrimaha doorashada dalka.
Beesha Caalamka ayaa dhinacyada siyaasadda dalka cadaadis ku saaraysa in ay si deg deg ah uga heshiiyaan muranka siyaasadeed ee u dhexeeya, si loo qabto doorasho nabdoon oo loo dhanyahay.